» यी हुन् नेपाल आईडलका उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु
यी हुन् नेपाल आईडलका उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०९:२८
मकवानपुर, १७ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु छनौट भएका छन् । गाला राउण्डमा प्रतिस्पर्धा गरेका ८ जना प्रतियोगीहरुमध्ये झापाकी रचना रिमाल बाहिरिएपछि उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु छानिएका हुन् । उत्कृष्ट ७ मा मेघा श्रेष्ठ, सज्जा चौलागाई, मुस्कान रानाभाट, नेशन पुन मगर, प्रविण बेड्वाल, केविन ग्लान तामाङ र किरण कुमार भुजेल रहेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल प्रतियोगीहरुका बारेमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
१) नेशन पुन मगर– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् नेशन पुन मगर । पोखराका नेशन पुन मगरले नेपाल आईडलको तेस्रो सिजनमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले पोखरा अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र गाला राउण्डको तेस्रो हप्ता मेघा श्रेष्ठसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै उनले तेस्रो हप्ता नै उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका थिए । उनले गाला राउण्डको पाँचौँ हप्तामा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन् । उनले एकपटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । पोखराका नेशन पुन मगरले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । उत्कृष्ट १२ मा परेकाहरुमध्ये नेशनले सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका हुन् । ‘हाईएस्ट भोटेट कन्टेस्टेन्ट’ बनेका नेशन २० वर्षका छन् । सानोमा फुटबलमा रुचि भएता पनि उनका बुवाले उनलाई फुटबलको सट्टा गितार किनिदिए अनि दाईले गितार सिकाईदिए । त्यसपछि नै उनी संगीतको यात्रामा सरिक भएका हुन् । औपचारिक रुपमा संगित नसिकेतापनि उनले अनलाईनबाट संगीत बारे धेरै कुराहरु सिकेका छन् । विभिन्न कभर गीत समेत गाएका नेशनले अहिलेसम्म आफ्नै गीतभने सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी पोखराको ‘एमपी’ ब्याण्डमा आवद्ध छन् । यसअघि नेपाल आईडलको दोस्रो सिजनमा समेत सहभागी भएका उनले पोखरा अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे पनि जितेका थिए ।
२) किरण कुमार भुजेल– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् किरण कुमार भुजेल । नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म २ वटा अवार्ड जितेका छन् । गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको शुक्रबार उनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै उनले गाला राउण्डको पाँचौँ उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा केविन ग्लानसँगै संयुक्त रुपमा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका थिए । २६ वर्षीय किरण महोत्तरीको बर्दिवास निवासी हुन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरणले एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरे । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । ‘नरनारीबाट प्रेमको’ बोलको पहिलो गीत सार्वजनिक गरेपश्चात किरणले ब्याण्डहरुसँगको सहकार्यका गीगहरु समेत गर्दै आएका छन् । ५० वटाभन्दा बढी गीत सार्वजनिक गरिसकेका किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् ।
३) मुस्कान रानाभाट– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् मुस्कान रानाभाट । उनले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म एउटा अवार्ड जित्न सफल भएकी छिन् । उनले गाला राउण्डको दोस्रो हप्तामा ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक’ अवार्ड जितेकी थिईन् । उनी पोखरा निवासी हुन् । नेपाल आईडल सिजन ३ मा फरक प्रस्तुतिहरु दिएर चर्चामा आएकी २२ वर्षिया मुस्कानले संगीत विषयमै स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ९ वर्षको उमेरमा नै ‘बेबी मुस्कान’ नामक एल्बम निकालेकी मुस्कान सानै उमेरदेखि सँगीतको क्षेत्रमा लागेकी हुन् । सानोमा गाउन नजाने पनि गाउँछु भन्दै अग्रसरता देखाएको उनी सम्झन्छिन् । सानोमा साईबाबाको भजन गाउने गरेकी मुस्कानले साँगितिक परिवारमै हुर्कने मौका पाएकी थिईन् । बुवा साँगितिक बाजाहरु ब्जाउने र आमा गाउने कलामा निपुण भएका कारण मुस्कानले पनि संगीतमा रुचि राख्दै अघि बढेकी हुन् । संगीतकार बन्ने बुवा र आमाको सपनालाई अहिले मुस्कानले अघि बढाएकी छिन् । आफु सहभागी भएको कुनै पनि साँगितिक कार्यक्रममा प्रथम हुने गरेकी मुस्कानलाई उनका परिवारले पनि संगीतमै करियर बनाउन मदत गरेका छन् ।
४) मेघा श्रेष्ठ– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् मेघा श्रेष्ठ । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ५ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा र तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । तेस्रो हप्ता नै उनले रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । उनले चौथो हप्ता केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेकी छिन् ।
५) सज्जा चौलागाइ– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् सज्जा चौलागाई । नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जित्ने प्रतियोगीमध्येकी एक सज्जाले गाला राउण्डको छैटौँ हप्तासम्ममा ८ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । सज्जाले गाला राउण्डको पहिलो र दोस्रो हप्तामा गरी २ वटा ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ को अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको चौथो हप्ता उनले मेघा श्रेष्ठ, केविन ग्लान तामाङ र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । पाँचौँ हप्ता प्रविण बेड्वालसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा पनि कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । पाँचौँ हप्ता नै उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा सज्जाले प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड अवार्ड नै जितेकी थिईन् । त्यस्तै छैटौँ हप्ताको बिक्रम बरालसँगको युगल प्रस्तुतिका क्रममा पनि सज्जाले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेकी छिन् ।
६) प्रविण बेड्वाल– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् प्रविण बेड्वाल । प्रविनले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ६ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र चौथो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा पनि ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड नै जितेका थिए । त्यस्तै उनले चौथो हप्ताकै सोलो पर्फोमेन्सका क्रममा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र मेघा श्रेष्ठसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । साथै पाँचौँ हप्ता उनले सज्जा चौलागाईसँगको प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड र पाँचौँ हप्ता नै उत्कृष्ट ८ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा सज्जा चौलागाईसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका छन् ।
७) केविन ग्लान तामाङ– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ मा अहिलेसम्म ५ वटा अवार्ड जितेका छन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिन ग्लान तामाङले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड जितेका थिए । उनले बिरगञ्ज अडिसनमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र गाला राउण्डको तेस्रो हप्तामा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड समेत जितेका थिए । गाला राउण्डको चौथो हप्ता उनले मेघा श्रेष्ठ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका छन् । उनले गाला राउण्डको पाँचौँ हप्ता उत्कृष्ट ८ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा किरण कुमार भुजेलसँग संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । केविनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका छन् ।